Kusoo qaado Poco M3 Pro qiimaha ugu fiican ee soo bandhigiddan bilawga ah | Androidsis
Pocophone wuxuu noqday soo saare leh tiro qalab ah oo suuqa yaala oo ay tahay in loo tixgeliyo si ku habboon u shaqeynaya dhammaantood. Mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee la soo bandhigay waa Poco M3 Pro, Taleefan casri ah oo muhiim ah in la tixgeliyo markii la doonayo in si buuxda loo galo kala duwanaanta-dhexe
Poco M3 Pro waa taleefan 5G ah oo leh astaamo muhiim ahWaxaa ka mid ah processor-ka awoodda badan iyo cunsur muhiim ah, baytariga waa 5.000 Mah. Waa terminaal la tixgelinayo iyadoo la ogyahay in sicirku muhiim yahay isla markaana ballanqaaday inuu siinayo madax-bannaanida maalinta oo dhan iyadoo la arkaayo isticmaalkeeda yar.
1 Sida looga faa'iideysto soo-jeedinta Poco M3 Pro
2 Little M3 Pro, qalab 5G ah
3 Bateriga awoodda badan
4 Kaamirada gadaal seddex ah
5 Isku xirnaanta iyo nidaamka shaqada
Sida looga faa'iideysto soo-jeedinta Poco M3 Pro
Dalacsiintu waxay socon doontaa oo keliya 48 saacadood, laga bilaabo 20-ka, markaa waa inaad sida ugu dhaqsaha badan uga faa'iideysataa inaad ku iibsato Poco M3 Pro-kaaga cusub dalabkan bilowga ah. Lambarka xayeysiinta ee ay tahay inaad ku qorto Aliexpress waa TSESLC12 oo waxaad heli doontaa qiimo dhimis $ 10 (€ 8,40).
Haddii aad adiguba degan tahay Ruushka, waad ka faa'iidi kartaa a kuuboon labaad taasi waxay dhici doontaa 24 saacadood (taas oo ah, Maajo 21): POTOTREND, laakiin sidaan dhahno cinwaankaagu waa inuu ahaado Ruush.
Ka faa'iideyso dalabkan una isticmaal kuuboonada xiriiriyaha soo socda:
> Ka hel dallacaadda 'Aliexpress' halkan
Little M3 Pro, qalab 5G ah
Faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah inay tahay taleefan jiil shanaad ah, waxay bixisaa qalab loo yaqaan 'Dimensity 700 chip' oo bixiya isku xirnaanta 5G. Soo-saaraha ayaa leh taageeradan, isaga oo siinaya korantada awood badan marka uu la shaqeynayo codsiyada jiilka ugu dambeeya iyo ciyaaraha.
GPU-da waa ARM Mali-G57 MC2, waxay kuxirantahay processor Dimensity 700 waxayna kusiinaysaa awood inaad kusocon karto gabi ahaanba, dhamaan waad ku mahadsantahay RAM-ka kujira, oo kiiskan labo ikhtiyaar noqon kara. Qaabka koowaad waa 4 GB oo xasuusta LPDRR4X ah, halka kan labaad uu yahay 6 GB.
Horeba qorshaha keydinta waxaad kala dooran kartaa labada ikhtiyaar sidoo kale, ikhtiyaarka koowaad waa 64GB, kan labaadna wuxuu labanlaabmay 128GB UFS 2.2. Waxay leedahay boos loogu talagalay MicroSD, sidaas darteed waxay ku siin doontaa koritaan haddii aad rabto meel bannaan oo dheeraad ah oo loogu talagalay sawirrada, fiidiyowyada iyo dukumiintiyada.
Bateriga awoodda badan
Mid ka mid ah awoodaha marka laga reebo inuu yahay 5G waa batteriga oo lagu daro heer ahaan, waxay noqoneysaa 5.000 mAh, oo ku filan in ay socoto maalinta oo dhan dadaal yar. Waa batari la shaqeeyay si uu u socdo wax ka badan 24 saacadood iyada oo aan si dhib leh loo dareemin dadaalka leh codsiyada aasaasiga ah ee maalinba maalinta ka dambaysa.
Kharashka batteriga waa 18W, oo laga qaadi karo 0 ilaa 100% saacad gudaheed, halka had iyo jeer lagugula talinayo inaad ka sareyso 20%. Little M3 Pro oo ay ugu mahadcelinayaan Cabirka 700 Ma noqon doonto mid aad loo isticmaalo mana ahan in lagaa qaado wax kayar maalin buuxda.
Kaamirada gadaal seddex ah
Poco M3 Pro 5G wuxuu leeyahay ilaa afar dareemayaal, saddex dhabarka ah iyo mid hore si aad u qaadatid sawirro fiican oo sawir qaadis ah markaad sawirro ka qaadayso meel kasta. Kaamirada weyn ee gadaal waa 48 megapixels, tan labaadna waa 2 megapixel macro, ta saddexaadna waa 2 megapixel sensor qoto dheer.
Horeba xagga hore ayay ugu duuban tahay 8 megapixel selfie sensor, tayada ugu dambeysa waxay noqoneysaa mid ku filan in la qaado sawirro wanaagsan, duubista fiidiyow ee qeexitaan sare iyo fiidiyowga wadahadalka. Ku dar, ku dar AI si loo caddeeyo daqiiqadaha loo baahan yahay.
Poco M3 Pro 5G wuxuu leeyahay isku xirnaan badan markaad xiriirineyso, oo ay ku jiraan tusaale ahaan duulimaadka internetka mahadnaqid 5G 5G NSA / SA. Chip wuxuu kordhin doonaa xawaaraha isticmaalka heerka xogta shirkad kasta oo bixisa qorshaha xogta jiilka shanaad.
5G-ga waxaa ku jira isku xirnaanta Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, Dual SIM, GPS, dareeraha IR (Infrared) sidoo kale wuxuu ku darayaa jaakad dhan 3.5 mm. Furitaanka taleefanka waa lateralSi tan loo sameeyo, waa inaad u habaysaa mar haddii taleefanku ku bilowdo dhawr tallaabo sida ku dhacda aalado kala duwan.
Nidaamka qalliinka waxaa lagu cusbooneysiiyay nooca ugu dambeeyay, gaar ahaan Android 11 iyadoo la cusbooneysiinayo wixii ugu dambeeyay ee bisha Abriil. Lakabka uu adeegsado Poco M3 Pro 5G waa MIUI 12 oo loogu talagalay POCO, oo bixiya waxyaabo badan oo ka mid ah astaamaha shirkadda Xiaomi, inkasta oo leh muuqaal ka duwan.
YAR M3 PRO
MUUQAAL 6.5-inch Full HD + IPS LCD / 90 Hz heerka cusbooneysiinta / Gorilla Glass 3
PRORESOR Qiyaasta MediaTek Qiyaasta 700
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 64 / 128 GB UFS 2.2
KAAMARKA DAR 48 MP f / 1.79 dareeraha ugu weyn / 2 MP macro sensor / 2 MP shidma qoto dheer
KAAMI HOR 8 MP f / 2.05
BATARY 6.000 Mah oo leh 18W lacag deg deg ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 11 oo leh MIUI 12 oo loogu talagalay POCO
Isku xirnaanta 5G / WiFi / Bluetooth 5.0 / GPS / 3.5mm Jack / Dual SIM / Sensor IR / USB-C
MUUQAALO KALE Dareeraha faraha faraha
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm / 190 garaam
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Kusoo qaado Poco M3 Pro qiimaha ugu fiican adoo adeegsanaya soo bandhigiddan
Codsiyada ugufiican ee kubiirida fiidiyowyada kujira Android